Wasiirka Ciyaaruhu xaq ma u leeyahay inuu Muddo kordhin u sameeyo Xidhiidhada?
You are here: Home somal Wasiirka Ciyaaruhu xaq ma u leeyahay inuu Muddo kordhin u sameeyo Xidhiidhada?
Wasiirka Wasaaradda Ciyaaraha, Dhalinyarada iyo Dalxiiska Somaliland, Cali Siciid Raygal, oo hore u kala diray xidhiidhadii Ciyaaraha ee dalka, sida Xidhiidhka Kubada Cagta, Xidhiidhka Kubada Koleyga (Gacanta), iyo Xidhiidhka Ciyaraha fudud (Orodka)
, wakhtigaas uu kala dirayna sheegay in aanay u baahnayn inay sii jiraan Xidhiidhada Ciyaaraha iyo Olombikada ee Kooxuhu soo doorteen, isla markaasna tilmaamay in hawlaha ciyaaraha ay ku filan yihiin xidhiidh la’aan ay Ciyaaraha dalka qaban karaan, oo aanay jirin baahi loo qabaa, isaga oo sabab uga dhigay in aanay is bixin karin oo Mushaharka ay ka qaataan Wasaaradda Ciyaaraha.
Wasiirka Ciyaaraha ayaa muddo kadib waxa uu isagu magaacabay Olombikada Qaranka iyo Xidhiidhada Ciyaaraha oo uu sheegay inay yihiin ku meel gaadh, oo muddo sannad ah ay xilka sii hayn doonaan, Sannad kadibna kooxuhu ay dooran doonaan Kooxaha Kubada Cagta ee Gobolada dalka.
Muddo xileedkii Xidhiidhada iyo Olombikada Qaranka oo Sannadkii loo doortay inay ku meel gaadhka uu dhammaaday, ayaa waxa xusid muddan in haddana Wasiirka Ciyaaruhu uu mar kale uu dib u doortay, isaga oo tilmaamay inay horumar ka sameeyeen xilkii loo doortay, isla markaana tartamo kala duwan ay qabteen.
Haddaba marka aynu ugu horeyn soo qaadano Xidhiidhka Ciyaaraha fudud (Orodka), ayaa dhawr tartan oo dhinaca Orodka ah ka qabtay dalka, halka xidhiidhka Kubada Cagta uu tartan u qabtay kooxaha heerka kowaad ee Caasimadda, isla markaana Magaalada Hargeysa ka hirgaliyey kooxaha heerka labaad iyo heerka saddexaad, halka xidhiidhka Kubada Koleyga uu isna tartano hirgaliyey, balse goorma ayaa kooxuhu ay dooran doonaan xidhiidhada?